Kooxaha Real Madrid Vs Manchester United oo Caawa isku dhaarsan kulan adag oo ka tirsan Koobka International Champions Cup 2014 (FAALO)
Garoomo ku yaala gudaha dalka Mareeykanka waxaa weli si xiiso leh uga socda tartanka Koobka International Champions Cup 2014 (ICC) oo ay isku arkeen inta badan kooxaha ugu caansan ama ugu tunka weyn maslaxa ciyaaraha Kubada cagta.
Kooxda shayaadiinta cas cas ee The Red Devils Man Utd oo tartankaan cel celis noqotay waxeey Caawa ( 22:05 fiidnimo) kulan adag kala hor tagi doonaan kooxda Los Blancos Real Madrid oo aan weli soo badin tartankaan. Manchester United oo Group (A) hogaanka u heeysa waxay kulankii ugu dambeeyay soo garaaceen naadiga Inter Milan halka Real Madrid guuldaro 1-0 ah ay kala soo kulantay kooxda As Roma .
Manchester United oo uu wato Macalin Louis Van Gaal hadii ay badiyaan kulanka caawa intaas ka dib waxay u soo bixi doonaan Fiinaalka koobka International Champions Cup 2014 oo ciyaartiisa kama dambeeysta ah lagu qaban doono 4-ta bisha Agoosto garoonka Miami Stadium.
Group (A) waxaa kula jira kooxaha Man Utd iyo Real Madrid naadiyada As Roma iyo Inter Milan oo labaduba ka wada socda horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A. Isla caawa oo Sabdi ah waxaa Group (B) wada ciyaari doona kooxaha Manchester City Vs Olympiakos halka beri oo Axad ah ay is fara saari doonaan kooxaha caanka ah ee The Reds Fc Liverpool Vs The Rossoneri Ac Milan.